इन्डक्शन सिकोन्ट फिटिंग भनेको के हो? प्रेरण सिक्का फिटिंग गियर र रिंगहरू
घर / आवेदन / फिटिंग हट्नुहोस् / कुन प्रेरण हरु फिटिंग हो
श्रेणी: फिटिंग हट्नुहोस् टैग: सक्रिट फिटिंग हीटर किन्नुहोस्, प्रेरण हीटिंग सिस्टम, प्रेरणा फिटिंग हटना, प्रेरण सिकोडिंग हीटिंग, फिटिंग हट्नुहोस्, फिटिंग गियर पels्क्तिहरू सink्कट गर्नुहोस्, फिटिंग गियरहरू सink्कट गर्नुहोस्, फिटिंग शाफ्ट हङ्क गर्नुहोस्, फिटिंग शाफ्ट गियरहरू संकुचन गर्नुहोस्, के प्रेरण हरु फिटिंग हो
इन्डक्शन सिकोन्ट फिटिंग भनेको के हो?
प्रेरणा फिटिंग हटना या त संकुचन वा अर्कोमा एक घटकको विस्तार सहित हस्तक्षेप र दबावको विकास, दुई कम्पोनेन्टहरूलाई मेकानिकल रूपमा समात्दै एक साधारण संचालन हो।
सम्मेलनमा भागहरू सुरक्षित गर्ने प्रत्येक विधिको अनूठा फाइदाहरू छन्। सिकोटी फिटिंगको मामलामा कुनै पनि धातुबाट बनेका अंशहरू भेटाउन सकिन्छ: इस्पातदेखि इस्पात, तामा, तामा, एल्युमिनियमदेखि इस्पात, म्याग्नेशियमदेखि इस्पात, इत्यादि। सामान्यतया, विस्तारको लागि तताउने काममा तापक्रम कम रहन यी परिवर्तनहरू हुन नदिन। धातु र संरचना जस्तै। तनाव सान्त्वनाको सम्भावनाको कारण, सिक्रिट फिटिंगको प्रभाव महत्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा मूल्याated्कन गर्नुपर्छ।
अभ्यासमा, अपरेसन सरल छ, सतहहरूको न्यूनतम तयारी आवश्यक हुन्छ, न्यूनतम नियन्त्रण, र बारम्बार सभा पछि सफा गर्नु पर्दैन। किनभने सुरक्षा बल मेकानिकल हो, सतही ऑक्सीकरण वा कल t्गले हस्तक्षेप गर्दैन, फ्लक्सको प्रयोगको लागि कुनै आवश्यकतालाई वेवास्ता गर्दै। सक्रिट फिटिंग द्वारा भेला पारिएका अंशहरू बाह्य घटकलाई छनौट गरेर तापक्रम बिच्छेद गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया विशेष गरी यसको तीव्र ताप दर र सटीकताको साथ इण्डक्शन हिटि forको लागि उपयुक्त छ, बिग्रिएको भागहरूको प्रतिस्थापन अनुमति दिन वा पign्क्तिबद्धताको सुधार।
प्रेरण हीटिंग अक्सर सवारी फिटिंग मा अद्वितीय लाभ प्रदान गर्दछ। हीटिंग स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ, एक ठूलो ठूलो कास्टिंग वा सावधानीपूर्वक मशीनिंग कम्पोनेन्ट नगरी, एक विकृतिलाई न्यून गरी एक ठूलो फिटको लागि स्थानीय रूपमा पर्याप्त विस्तार प्रदान गर्दछ। यो द्रुत, छनौट तताउने मा पनि स noted्कुचित फिट कम्पोनेन्टको डि असेंब्ली सुबिधा सहयोग गर्दछ, माथि उल्लेख गरिए अनुसार। थप रूपमा, प्रेरण तताउने एक flameless, छिटो, दोहोरिन सक्ने प्रक्रिया प्रदान गर्दछ जुन न्यूनतम ह्यान्डलिंग र सजिलो स्वचालनको लागि उत्पादनमा समाहित गर्न सकिन्छ।
HLQ प्रेरण हीटिंग सिस्टम फिट गियर र रिंगहरू संकुचित गर्नका लागि मोटर वाहन उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू विमान, रेल र ट्रक मर्मत गर्न पनि प्रयोग गरीन्छन्। हाम्रो मोबाइल प्रणालीहरू अफशोर प्लेटफार्महरूमा फिटिंग कार्यहरू स shr्कटको लागि प्रयोग गरिन्छ र बढि पावर स्टेशनहरूको टर्बाइनमा विशाल नट र बोल्टहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ।
सामान्यतया, धातुहरू तापक्रम र अनुबन्धको प्रतिक्रियामा विस्तार हुन्छ जब यो चिसो हुन्छ। तापमान परिवर्तनको यो आयामी प्रतिक्रिया थर्मल विस्तारको रूपमा चिनिन्छ। इन्डक्शन सिकोन्ट फिटिंग हो जहाँ हामी यो प्रभाव प्रयोग गर्दछौं कि त फिट गर्न वा भागहरू हटाउन। एक धातु कम्पोनेन्ट १ 150० डिग्री सेल्सियस र °०० डिग्री सेल्सियसको बीचमा तताइएको छ जसले गर्दा यो विस्तार गर्न सकिन्छ र अर्को कम्पोनेसन घुसाउन वा हटाउन अनुमति दिन्छ। जब, उदाहरणका लागि, पाइपको दुई भागहरू सँगै फिटिंग गर्दा, एक भागको व्यास अर्को अंश माथि फिट गर्नको लागि पर्याप्त विस्तार नभएसम्म तताइन्छ। जब जोडिएका भागहरू परिवेशको तापक्रममा फर्कन्छ, संयुक्त तनावपूर्ण र बलियो हुन्छ - 'स shr्कित फिट'। त्यस्तै, थर्मल विस्तार पृथक गर्न भन्दा पहिले संयुक्त ढीला प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रक्रिया नियन्त्रण योग्यता, स्थिरता, शुद्धता र गति प्रेरण सिकोिट फिटिंग को प्रमुख लाभ हो। प्रेरण तातो वितरण धेरै सही छ। गर्मी घटकको भित्र उत्पन्न भइरहेको कारण, तपाई केवल त्यस अंश तात्नुहुन्छ जुन तपाई ताप्न चाहानुहुन्छ, वरिपरिको वातावरण होइन। अंडाकारको जोखिम कम गर्नका साथै यो ऊर्जा कुशल छ। थप रूपमा, प्रेरणले अत्यन्त समान उष्णता उत्पादन गर्दछ, यसले प्राय: कम तातो प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। तापमान नियन्त्रण र्याम्प-अप समय र होल्डिंग तापक्रमको सटीक नियन्त्रणको साथ सहि छ। परम्परागत तताउने विधिहरू भन्दा फरक, प्रेरणमा कुनै नग्न ज्योति समावेश हुँदैन। यसले इन्डक्शन सिकोन्ट फिटिंगलाई अस्थिर वातावरणमा विशेष प्रकारको पेट्रो रसायनिक अनुप्रयोगहरूमा विभिन्न प्रकारका अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
उद्योग र अनुप्रयोगहरूको एक विस्तृत विविधता प्रेरण सिकोिट फिटिंगबाट लाभान्वित हुन सक्छ। हाम्रो प्रेरण हीटिंग प्रणाली फिट गियर, बेयरिंग र रिंगहरू संकुचन गर्न मोटर वाहन उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू मेकानिकल उद्योगका साथै हवाईजहाज र रेलहरूको मर्मतका काममा लागेका छन्। हाम्रो मोबाइल प्रणालीहरू जहाजहरू र अपतटीय प्लेटफार्महरूमा फिटिंग कार्यहरू स shr्कटको लागि प्रयोग गरिन्छ र बढ्दो पावर स्टेशनहरूको टर्बाइनमा विशाल नटहरू र बोल्टहरू फिट गर्न र हटाउन प्रयोग गरिन्छ साथ साथै हावा पावर जेनरेटरहरूमा बीयरि and र शाफ्टहरू।
प्रेरण सक्रिट फिटिंग प्राविधिक सामान्यतया निम्न प्रक्रियाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ:
Ge गियर व्हिलमा फिटिंग (शाफ्टमा पिनियन्स, आदि)
Ref रेफ्रिजरन्ट कम्प्रेसरहरूको लागि कभर गर्दछ
Machine मेशिन-उपकरणहरूको लागि मोर्स टेपर्स
Urb टर्बाइनहरूको लागि घुमाउने भागहरू।
फाइभेन्सले एरोस्पेस उद्योगको टेक्नोलोजिकली उन्नत खण्डहरूका सबै प्रकारका विवरणहरू पूरा गर्दछ जुन ग्यारेन्टी गर्दछ प्रेरणा फिटिंग हटना सटीक र भित्री सतहहरू दूषित नगर्नुहोस्, विशेष गरी जब नाजुक भागहरू जुटाउँदा।
इन्सुलेशन ताप सिंक हाइड्रोलिक फ्लोरेन्ज
प्रेरण फिटिंग बीयरिंगहरू
प्रेरक संग फिटिंग स्टेटर र रोटर हटना